Hulk Hogan momba ny fampihavanana amin'i Randy Savage - Wwe
Hulk Hogan momba ny fampihavanana amin'i Randy Savage
Vao haingana ny Hall of Famer WWE Hulk Hogan no niresaka WWE.com hiresaka momba ny fifandraisany amin'ny Hall of Famer WWE, ilay 'Macho Man', Randy Savage, efa tara.
Tamin'ny resadresaka iray nientam-po lalina, Hulk Hogan dia niresaka lohahevitra maro momba ny Macho Man. Tafiditra ao anatin'izany ny fampisehoana hetsika lehibe WrestleMania V, ny fisakaizan'izy ireo ivelan'ny peratra sy ny fampihavanana talohan'ny nahafatesan'i Randy Savage tamin'ny 2011.
Velomy ny voalohany @SummerSlam hetsika lehibe iray manontolo, amin'ny alàlan'ny @WWENetwork ! @HulkHogan #MachoMan @MDMTedDiBiase #AndreTheGiant
JEREO IZAO ▶ ️ https://t.co/0cryH5INmb pic.twitter.com/LpPpfFB6xT
- WWE (@WWE) 4 Aogositra 2020
Hulk Hogan dia nanokatra ny momba ny fiasa miaraka amin'i Randy Savage mahery fo hatrany, tamin'ny fanamarihana fa ny filohan'ny WWE, Vince McMahon, ihany no afaka mampitovy ny tanjaky ny Macho Man:
'Fantatrao, voalohany rehefa miara-miasa amin'i Randy ianao, mahery izany, ilay olona tokana azoko niantso tamin'ny telo na efatra ora maraina hiresaka momba ny tolona ary hamaly ny findain'izy ireo aza dia Vince McMahon. Ary toy izany i Randy. Afa-tsy niantso ahy i Randy! 'Hey, rahalahiko. Nahazo hevitra. ' Ka rehefa nandry teo am-pandriana niaraka tamin'i Randy ianao dia tao anatin'io fotoana io ianao.
Na izany aza, nanamarika i Hulk Hogan fa ny tanjaky Savage dia teo amin'ny fiainan'ny Macho Man, toy ny fifandraisan'i Savage sy ny fanambadian'izy ireo. Miss Elizabeth :
'Tsara na ratsy, rahalahy. Hisarika anao hamakivaky ny fotaka izy na tianao izany na tsia. Ary nahery vaika izany, satria olona tia fatratra i Randy, ary tena tia an'i Elizabeth izy. Zoky a, lazaiko anao, fa manjavozavo tokoa ny andalana '
Namana sa Loza?
Raha nanontaniana izy raha toa ka aleony Randy Savage ho mpiara-miasa amin'ny ekipa na mpanohitra any am-piadiana, dia nanaiky haingana i Hulk Hogan fa nankafy ny fotoana niainany tany WWE rehefa nifanandrina tamin'ny Macho Madness i Hulkamania:
'Rival, Rahalahy, vola tao amin'ny banky izy. Nandoa vola ny rehetra mba hahita an'i Randy handeha amin'izany. Azoko atao ny miady azy inefatra misesy ao amin'ny Madison Square Garden ary mivarotra ny seza rehetra eny ivelany. Aleoko kokoa hiasa aminy, satria tena tsara izy teo amin'ny peratra. '
Mega Powers dia matanjaka toa azy. Malahelo mafy an'i Randy aho. Manantena aho fa afaka manana fihomehezana sy milina fanodinana miaraka aminy dieny izao. Fitiavana irery ihany HH pic.twitter.com/KNQ6oUKTp7
- Hulk Hogan (@HulkHogan) 24 septambra 2017
Hulk Hogan dia hanonona an'i Randy Savage ho mpanohitra WrestleMania tiany indrindra amin'ny fotoana rehetra:
'Tss. Fantatrao, tsy afaka maka na inona na inona miala amin'ity lalao Andre ity ianao, ry rahalahy, Fotoana WrestleMania io - olona 93,000 sy Andre no nampita ny fanilo ho ahy. Ity lalao ity miaraka amin'ny The Rock, izay niasa tamina orinasa hafa, nifaninana tamin'ity orinasa ity, ary niverina teto toy ny soavaly mainty. Naneho ny tsy fivadihan'izy ireo ny vahoaka, goavambe izany.
Fa raha tena, tena, tena nandeha tokoa niaraka tamin'ny tsy fiovaovana, fisakaizana ary teo foana ho ahy aho, dia i Randy no lehilahy tiako indrindra. Izany no antony hamafisana rehefa nisy izany fipoahana izany rehefa nisaraka izy. Tsy te hifandray amiko nandritra ny valo taona izy. Misaotra an'Andriamanitra fotsiny aho fa tafaraka izahay talohan'ny nahafatesany. '
Fihavananan'i Hulk Hogan sy Randy Savage
Mampalahelo fa ny fiarahan'i Hulk Hogan sy Randy Savage dia tsy ho lafy tsara foana. Noho ny olana manokana isan-karazany, Hulk Hogan sy Randy Savage dia mety ho lavo tamin'ny faran'ny taona 1990 sy tany am-piandohan'ny taona 2000.
Na izany aza, i Hulk Hogan dia hisokatra momba ny toe-javatra nanjakan'i Hogan sy Savage tao anatin'ny volana maromaro talohan'ny nahafatesan'i Savage tamin'ny 2011:
'Nifanena tany amin'ny biraon'ny dokotera izahay, nandalo fandidiana ambaratonga fahafito na fahavalo aho, ary tsy afaka nandalo EKG satria vao avy nifangaro tamin'ny fanatoranana isaky ny telo na efa-bolana. Tsy afaka nahazo ny lamosiko izy ireo. Nianjera ny lamosiko ary nilaza tamin'ilay vadiko vaovao Jennifer aho fa tsy handeha intsony intsony ary izany hadalana rehetra izany. Izaho sy Jennifer dia nipetraka teo amin'ireo seza kely ireo tao amin'ny biraon'ny dokotera tao Tampa ary tampoka teo dia nivoha ny varavarana ary niditra i Randy. 'Yeeeah! Ooooh yeah! Inona ny malaza?' Nandeha aho, '[Gasp].' '
'Natahotra aho ka natahotra ny ho faty. Ary lasa izy, 'Eh, anadahy. Fa misy inona, Hogan? ' Nanana izany mamirapiratra izany teo amin'ny masony izy ary tena salama. Nahazo ny lanjany izy ary nanana peratra mariazy izy. Hoy aho hoe: 'Hey, Mach, inona no anton'ireo peratra ireo?' Hoy izy: 'Hey, vao nanambady ny malalako tamin'ny fahazazako.' '
'The Macho Man' Randy Savage dia nodimandry tamin'ny 20 Mey 2011 teo amin'ny faha-58 taonany. Voan'ny aretim-po tampoka ny WWE Hall of Famer rehefa nitondra ny fiarany niaraka tamin'ny vadiny. Soa ihany fa naratra kely fotsiny ny vadiny.
7taona izay nandalo androany Macho, nandrava ny rahalahiko, tia4U HH ihany
- Hulk Hogan (@HulkHogan) 20 Mey 2018
Hulk Hogan dia niresaka momba ny fizotry ny fampihavanana nataony tamin'i Randy Savage manakaiky ny fandalovan'ny sary WWE:
'Mety telo na efa-bolana angamba dia niresaka an-telefaona imbetsaka izahay. Nanasa azy aho mba hanana barbeque, ary niverina teo amin'ny lalan-kaleha, izay milay. '
'Taty aoriana, niaraka tamin'i Lanny, rahalahiny aho, tamin'ny fampisehoana tolona tsy miankina. Nolazainy tamiko fa tsy nanao tsara ny renin'izy ireo tamin'ny fahafatesan'i [dadan'i Randy] Angelo. Ka nikasa ny hanana barbeque ao an-tranony izahay - satria nifandray tsara tamin'ny renin'i Randy aho - ary nanandrana nampifaly azy. Niantso an'i Randy avy teo amin'ny kianja filalaovana izahay sy Lanny. Telo andro taty aoriana dia voan'ny aretim-po izy. Adala izany. '
Ahoana ny hevitrao amin'ny hetsika lehibe WrestleMania V eo amin'i Hulk Hogan sy Randy Savage? Ary inona no tadidinao Hulk Hogan tianao indrindra? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra etsy ambany.
iza no youtuber manankarena indrindra 2020
maninona aho no raiki-pitia haingana be
ahoana no ilazana azy fa tsara tarehy izy
chris benoit antony nahafaty
famantarana fa te hiverina amiko ny sakaizako taloha
mitanisa momba ny fihavanana amin'ny fiainana